ဗီဒီယိုကဒ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးလုပ်နည်း - မေးခွန်းနှင့်အဖြေ - 2019
သစ်တစ်ခုဂရပ်ဖစ်ကဒ် (နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အသစ်တစ်ခုကိုကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်) ဝယ်ယူသည့်အခါ - (စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်မှာဗီဒီယိုကဒ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးရန်) လို့ခေါ်စိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်သွားရန်ပိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ (သင်မကျွမ်းတဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးလက်ကိုယူအထူးသဖြင့်လျှင်) လည်းဖယ်ရှားပစ်ရအသုံးဝင်သည်ကို၎င်း, "အဟောင်း" ဗီဒီယိုကဒ်။
ဒီသေးငယ်တဲ့ဆောင်းပါး၌ငါတစ်ပြိုင်နက်ဒီစမ်းသပ်မှုထဲမှာပေါ်ထွန်းသောအသုံးအများဆုံးမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ဗီဒီယိုကဒ်စစ်ဆေးဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆဖို့ခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းချင်ပါတယ်။ ဒါရဲ့ start ပါစေ ...
1. ပိုကောင်းသည်ဟုစမ်းသပ်ဖို့ program တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ?
ကွန်ရက်ထဲမှာဗီဒီယိုကတ်များစမ်းသပ်များအတွက်အစီအစဉ်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုများစွာယခုရှိပါသည်။ FurMark, OCCT, 3D, Mark: သူတို့ကိုများထဲတွင်လူသိများသော-နည်းနည်းများနှင့်ကောင်းမွန်စွာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပမာနှစ်ခုလုံးရှိပါတယ်။ အောက်ကဥပမာမှာငါ FurMark မှာဆက်နေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ...
ကဒ်များကိုအတည်ပြုရန်နှင့်စမ်းသပ်ဖို့ (ကျနော့်အမြင်၌) ကိုအကောင်းဆုံး utilities တစ်ခုမှာ။ ထို့အပြင်စမ်းသပ် AMD ၏ (ATI Radeon) ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့် NVIDIA နှစ်ဦးစလုံးဖွစျနိုငျသ; သာမန်ကွန်ပျူတာများ, နှင့် laptop အဖြစ်။
လုံးဝနီးပါးအားလုံးမှတ်စုစာအုပ်မော်ဒယ်များကထောက်ခံလမ်းအားဖြင့် (အနည်းဆုံးငါ utility ကိုများအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည့်တစုံတယောက်သောသူသည်, တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီမဟုတ်) ။ ဒါဟာအားလုံး Windows ကိုရက်စွဲကိုဗားရှင်းကိုနှိပ်၌ရှိသကဲ့သို့ FurMark ပြေးနေသည်: XP, 7, 8 ။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟုတ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာ၏အပြုအမူနှင့်နီးစပ်သောအာရုံစိုက်: no "ဆိုတဲ့ Beep" (ဒါခေါ်ညှစ်သံမြည်) ရှိသင့်ပါတယ်။
ရုံမော်နီတာပေါ်တွင်ဂရပ်ဖစ်၏အရည်အသွေးမှအနီးကပ်ကြည့်ယူပါ။ အစင်း, ဂယက်ထ, ပုံပျက်: မဖြောင့်သောဗီဒီယိုတစ်ခုကဒ်ပါလျှင်အမှန်မဆိုချွတ်ယွင်းသတိပြုမိ။ ငါအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုကရှင်းလင်းစေရန် :. အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချို့သောဥပမာကိုကြည့်ပါ။
Laptop ကို HP က - မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဂယက်ထ။
တစ်ဦးကပုံမှန်ကို PC - ဂယက်နှင့်အတူဒေါင်လိုက်လိုင်း ...
အရေးကြီး! တောင်မှမျက်နှာပြင်ပေါ်နှင့်အားနည်းချက်တွေကိုမရှိဘဲပုံအရည်အသွေးကိုလျှင်, ရှိသမျှညာဘက်င်ကြောင်းကိုဗီဒီယိုကဒ်ကောက်ချက်ချရမည် - သင်မပေးလို့ရတယ်။ သာ "စစ်မှန်သော" အများဆုံးက load (အားကစား, စိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်မှု, HD ကို-ဗီဒီယို, etc) ပြီးနောက်၎င်းသည်ထိုကဲ့သို့သောနိဂုံးချုပ်အောင်တတ်နိုင်သမျှဖြစ်လိမ့်မည်။
စွမ်းဆောင်ရည်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်စိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်သွားရန်မည်သို့ 3. ?
အထက်တွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့, ငါ့ဥပမာထဲမှာ, ငါသည်အ FurMark ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ယင်း utility ကို install လုပ်ပါနှင့်စတင်ပြီးနောက်ပြတင်းပေါက်အောက်ပါပုံရိပ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့, သင်များ၏ရှေ့မှောက်၌ပေါ်လာသငျ့သညျ။
စကားမစပ်ဒီ tool မှန်ကန်စွာ (- Nvidia GeForce GT440 အောက်ကပုံတွင်) သင့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်၏မော်ဒယ်ဖော်ထုတ်ထားပါတယ်ရှိမရှိသတိပြုပါ။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှု GeForce GT440 ဂရပ်ဖစ်အတွက် NVIDIA ဘို့ကောက်ယူကြလိမ့်မည်
ထိုအခါသင်သည်ချက်ချင်းစမ်းသပ် (ငြိမ်ဝပ်စွာနေဘို့အတော်လေးမှန်ကန်သော setting များကိုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အထူးမလိုအပ်ပါဘူးတစ်ခုခုပြောင်းလဲပစ်) စတင်နိုင်ပါသည်။ သည် "Burn-in ကိုစမ်းသပ်" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
FuMark ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုဂရပ်ဖစ်ကဒ်ပေါ်မှာအလွန်လေးလံသောဝန်သည်နှင့်အလွန်ပူဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုသငျသညျသတိပေး (အပူချိန် 80-85 ဂရမ် TS အထက်မြင့်တက်လျှင်, လမ်းဖြင့် - ။ အဆိုပါကွန်ပျူတာရိုးရိုး reboot နိုင်သည်သို့မဟုတ် image ကိုပုံပျက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်) ။
စကားမစပ် FuMark အချို့လူသတ်သမား "မကျန်းမာ" ကတ်များခေါ်ပြီ။ သင့်ရဲ့ဂရပ်ဖစ်ကဒ်အဆင်ပြေမပါလျှင် - ကထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုအပြီးပြုလုပ်ပျက်စီးနိုင်ဖယ်ထုတ်ထားသည်မဟုတ်တကား!
သည် "GO!" Button ကိုနှိပ်ပြီးနောက် စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။ မျက်နှာပြင်တွင်ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွန်ထဲမှာလည်လိမ့်မည်ဟု "ဒိုးနပ်" ပေါ်လာပါသည်။ ဂရပ်ဖစ်ကဒ်အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုဝန်မဆို newfangled ကစားစရာ pohlesche!
စမ်းသပ်စဉ်အတွင်းမည်သည့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအစီအစဉ်များကို run ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုပထမဦးဆုံးဒုတိယပြေးထံမှကြီးထွားဖို့ကိုစတင်တံ့သောအပူချိန်, အဘို့အစောင့်ကြည့် ... အချိန် 10-20 မိနစ်ခန့်စမ်းသပ်စဉ်။
စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကိုအကဲဖြတ်ဖို့ဘယ်လို 4. ?
အခြေခံအားဖြင့်မဖြောင့်သောဗီဒီယိုတစ်ခုကဒ်လျှင် - သင်စမ်းသပ်မှု၏ပထမတစ်မိနစ်အတွင်းသတိထားမိကြဘူး: အ Monitor ပေါ်မှာပုံရိပ်ကိုချွတ်ယွင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်အပူချိန်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ကိုသတိပွုမိခြင်းမရှိဘဲ, ရိုးရှင်းစွာတက်သွားပါလိမ့်မယ် ...
ဗီဒီယိုကဒ်အပူချိန် 80 က c ထက်မပိုသင့်ပါတယ်။ C. (သင်တန်း၏, အများအပြားက Nvidia ကတ်များ၏အရေးပါသောအပူချိန်ဗီဒီယိုကဒ်၏မော်ဒယ်ပေါ်နှင့်သေး ... မူတည်. - ။ 95+ ဂရမ် TS) ။ မှတ်စုစာအုပ်များအတွက်, အပူချိန်ထောက်ခံချက်ငါသည်ဤဆောင်းပါး၌ထုတ်ဖော်ပြောဆို:
စံပြအပူချိန်ဂရပ်တဲ့စက်ဝိုင်းခြမ်းသို့သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပါက: ဆိုလိုသည်မှာ ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးချွန်ထက်မြင့်တက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိ - ပဲဖြောင့်မျဉ်းကြောင်း။
မြင့်မားသောဗီဒီယိုကဒ်အပူချိန်အအေးစနစ်၏ပျက်ကွက်အကြောင်းကို, ဒါပေမယ့်လည်းမြေမှုန့်တွေအများကြီးနှင့်၎င်း၏သန့်ရှင်းရေးဘို့လိုအပ်ကြောင်းအကြောင်းကိုသာပြောတတ်နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာ, ကဆောင်းပါးသန့်ရှင်းရေးအကြောင်းကို (စမ်းသပ်ရပ်တန့်ဖို့နှင့်စနစ်ယူနစ်အတည်ပြုရန်, မြေမှုန့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်:
"ဒီဗီဒီယိုကိုမောင်းသူတုံ့ပြန်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ခဲ့သည် ... ": ကဲ့သို့တက်လျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်ရှိပါတယ် shibok သငျ့သညျ။
တကယ်တော့သင်တို့သည်နောက်ပြဿနာရှိသည်အထက်ခြေလှမ်းများလျှင် - ဗီဒီယိုကဒ်လုပ်ကိုင်နိုင်သောထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါ!
စကားမစပ်, ဗီဒီယိုကဒ်စစ်ဆေးဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း - ဆိုဂိမ်းကို run (ဖြစ်နိုင်ရင်တစ်အသစ်များပိုမိုခေတ်မီ) နှင့်ကနာရီစုံတွဲတစ်တွဲကစားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဗီဒီယိုကဒ်အတော်လေးယုံကြည်စိတ်ချရသောကြောင်း - မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိပုံအမှားအယွင်းများနှင့်ဆုံးရှုံးမှုမပုံမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်။